Judo : mpikatroka fito mianadahy hiofana any Japon | NewsMada
Judo : mpikatroka fito mianadahy hiofana any Japon
Noraisin’ny masoivohon’i Japana, Ichiro Ogasawara, teny amin’ny toeram-piasany eny Ambatobe omaly, ireo mpikatroka judo, nahazo fiofanana ka handeha ho any Japon. Raha tsiahivina, fito mianadahy izy ireo no nisitraka izany. Hianatra sady hiofana mandritra ny telo taona any amin’ity firenena ity i Tsiorinirina Ellena Tessia sy i Nomenjanahary Daniella. Tsiahivina fa nahitana izao fiofanana ho azy mirahavavy izao ny Komity olympika malagasy (Kom). Nambaran’Andrianasoloniaiko Siteny, filohan’ny Kom, fa tanjona ny hananan’i Madagasikara tompondakan’i Afrika, afaka telo taona, ka nandefasana indrindra ireo atleta mbola tanora izany. Hanainga, ny volana avrily ho avy izao, izy roa vavy ireo.
Ankoatra izay, dimy mianadahy : Andrianaivoravelona Tatiana, Rakotovao Mirana, Ramiandrisoa Haingoniaina Durianah, Andriamanoelina Kevin Royce, miampy an-dRatovoson Hery Manoela, mpanazatra, hiofana sy hanaraka fanazarantena, mandritra ny iray volana ao amin’ny “Université internationale des arts martiaux”, ao Chiba, Japon. Tafiditra indray ao anatin’ny tetikasan’ny governemanta japoney izany. Nambaran’i Siteny fa mendrika izy ireo ary tena nisongadina, nandritra ny taona 2017 lasa teo iny. Hanainga, ny 29 janoary izao, izy ireo.
Nolazain’Atoa Ichiro Ogasawara fa tokony ho fito andro ny faharetan’ity fiofanana ity, saingy noho ny fanampian’ny federasiona malagasy, afaka mijanona mihoatra ny iray volana any an-toerana izy ireo. Ankoatra izay, fanomanana sahady ny ho fiatrehana ny “Lalao Olympika 2020”, hatao any Tokyo, izao fiaraha-miasan’ny governemanta japoney sy ny federasiona malagasin’ny judo izao.